बलिउडलाई लाग्यो फेरि अर्काे यस्तो दुःखद धक्का रहेनन् परवेज खान – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > बलिउडलाई लाग्यो फेरि अर्काे यस्तो दुःखद धक्का रहेनन् परवेज खान
बलिउडलाई लाग्यो फेरि अर्काे यस्तो दुःखद धक्का रहेनन् परवेज खान
admin July 28, 2020 July 28, 2020 अन्तराष्ट्रिय, समाज	0
पछिल्लो समय बलिउडले निकै राम्रा हस्ती गुमाएको छ । लगायतार नराम्रा खबर आइरहेका छन् । अब एक्शन निर्देशक परवेज खानको सोमबार हृदयघातको कारण निधन भएको खबर भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । उनको निधन ५५ वर्षको उमेरमा भएको हो । परवेजले शाहरुख खान, अक्षय कुमार, वरुण धवन जस्ता ठूला स्टारसँग काम गरेका थिए।
परवेज खानले श्रीराम राघवनको अन्धाधुन र बदलापुर जस्ता सफल फिल्महरूमा अभिनय गरेका थिए । लामो समयदेखि नीसँगै रहेका निशांत खानले उनको निधनवारे पुष्टि गरेका छन् । खानको लामो समय देखि छाती दुख्ने गुनासो गरेका थिए । पछिल्लो समय पनि उनलाई सोही समस्या भएपछि अस्पताल लगिएको थियो । परवेजलाई रुबी अस्पताल लगिएको र उनलाई बिहान हृदयघात भएको बताइएको छ । अस्पताल लैजाना साथ चिकित्सकले उनलाई निधन भएको घोषणा गरेका थिए ।
उनलाई त्यसको अघिल्लो दिन भने कुनै समस्या थिएन । अचानक छाती दुख्यो भनेका उनलाई अस्पताल लैजाना साथ निधन भएको घोषणा गरिएको छ । निशांतले भनेका छन् उसलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या थिएन, हिजो रातको मात्र छातीमा दुखाइ थियो।
परवेज खानले १९८६ देखि बलिउडमा काम गर्न शुरू गरेका थिए। फिल्म निर्माता हंसल मेहताले भने कि एक्शन निर्देशक उनको काममा विशेषज्ञ थिए। उनले २०१३ मा शाहिदमा परवेजसँग काम गरे जसले राष्ट्रिय पुरस्कार समेत जिते ।
हंसल मेहताले आफ्नो ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘भर्खरै यो थाहा भयो कि कार्य निर्देशक परवेजको निधन भयो। हामीले शाहिद मा सँगै काम गरेका थियौं, जसमा उनीहरूले दंगल दृश्यहरू एकल टेकमा फिल्माएका थिए । उहाँ धेरै कुशल, ऊर्जावान र राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। परवेजको आत्माले शान्ती पाओस् । तपाईंको आवाज मेरो कानमा अझै प्रतिध्वनि छ।’
अविवाहित युवतीमा दूध चुहिने समस्या किन हुन्छ? समाधान सहित हेर्नुस्
के गर्दैछ प्रसासन? यिनै युवती हुन सक्छिन् निर्मला पन्तकी दोषी! तपार्इलार्इ के लाग्छ?
१२ वर्षीया बालिकालाई गोठमा गएको बेला बलात्कार गर्ने यिनै हुन ४७ बर्षिय दलबहादुर? के भन्नु छ?
गुल्मीमा भेटिए ८ बर्षे यी चटपटेवालाको जोडी, यसरी कमाउँछन दिनकै मनग्गे पैसा (मन छुने भिडियो)